? Basque ရှိ လများ- စာရင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ် - UniProyecta
Basque ဘာသာစကား၏အဓိကဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုမှာဥရောပ၌ရှေးအကျဆုံး (လူသိများသည်) ဖြစ်သည်။ သုတေသီတို့၏အဆိုအရ Basque သည်ယနေ့ထိသုံးနေဆဲဘာသာစကားအနည်းငယ်အနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကိုမသိရသေးပါ။ ဘာသာဗေဒပညာရှင်များက Basque ကိုပြောဆိုသူများ၏သမိုင်းကြောင်းအရ၎င်းသည်သမိုင်းကြောင်းအရတိုက်ရိုက်အမွေခံရသည်ဟုဆိုသည်။ ဤဘာသာစကားကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀၀ က Ekain, Lascaux နှင့် Altamira လိုဏ်ဂူများတွင်နေထိုင်သူများ.
ဒီဘာသာစကားရဲ့သမိုင်းဟာ Neolithic ခေတ်ကတည်းကရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် Euskera ရဲ့မူလအစကအစောကြီးအချိန်ကဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တွင် Basque လူ ဦး ရေ၏ ၃၇% သည် Euskera ကိုဆိုလိုသည်။ Basques များနေထိုင်သောပထဝီဝင်ဒေသတွင် Paleolithic ကာလ၌ကျန်ရှိနေသောအရာများစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာဤဘာသာစကားသည်သမိုင်းကြောင်းကြီးရှိသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်aအမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုပုံဥပမာများနှင့် Basque ရှိလများစာရင်း ဒါကြောင့်မင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြနိုင်သလိုအနည်းဆုံးလူတွေပြောနေတာကိုနားလည်ပါ။
1 Basque နှင့်ဥပမာများလများစာရင်း
1.2 Basque ရှိလ၏သီချင်း
လတွေကိုတိုက်ရိုက်မသွားခင်၊ သူတို့ဘာလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ရက်များမှာ
သောကြာနေ့: ostiral ဖြစ်သည်
တနင်္လာနေ့မှာငါသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်: Astelehenean nire zinemara joango naiz nire lagunekin
အင်္ဂါနေ့မှာသူဌေးနဲ့စကားပြောဖို့ငါတို့ရုံးကိုသွားရမယ်: Asteartera bulegoetara joan behar dugu buruzagiarekin hitz egiteko
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များအရရာသီဥတုပူလိမ့်မည်: Asteazken eguraldiaren arabera, klima beroa egongo da
ကြာသပတေးနေ့သည်ငါမကြိုက်သောရက်သတ္တပတ်၏နေ့ဖြစ်သည်: Osteguna ez zait gustatzen zaidan astean ဖြစ်သည်
သောကြာနေ့မှာငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်မယ်ထင်တယ်: Uste dut ostiralean nire lagunekin paseatuko dut ဖြစ်သည်
စနေနေ့မှာငါမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကမ်းခြေကိုသွားမယ်: Larunbatean hondartzara joango naiz nire senideekin denbora dibertigarri လင်းနို့ hasteko
တနင်္ဂနွေနေ့မှာငါအနားယူရမယ့်နေ့ဖြစ်လို့ငါပျော်လိမ့်မယ်: Igandean၊ atseden eguna izango dut, pozik nago
စပိန်အတွက် Basque ၌
ဇန်နဝါရီလကိုကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကဒီနှစ်ရဲ့အစ၊ ငါတို့ရဲ့ပန်းတိုင်တွေပြည့်ဖို့အချိန်: Urtarrilaren gustatzen zait, urteak aurrera egin ahala gure helburuak betetzeko
ဖေဖော်ဝါရီသည် Valentine's Day ကျင်းပသောလဖြစ်သည်: Otsailean hilabete လင်းနို့ ospatzen da San Valentin eguna
မတ်လသည်ငါအနှစ်သက်ဆုံးသောလများထဲမှတစ်နှစ်ဖြစ်သည်: Martxo gehien gustatzen zaidan urteko hilabeteetako bat da
ဇွန်လမှာငါပြင်သစ်ကိုခရီးသွားမယ်ထင်တယ်: Ekainean Frantziara bidaia egingo dut
ဒီနှစ်ဇူလိုင်လမှာငါတက္ကသိုလ်စာသင်တာကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ငါပျော်တယ်: Pozik nago၊ aurtengo uztailean unibertsitateko seihilekoa bukatuko dutelako
ငါသြဂုတ်လမှာငါ့မွေးနေ့အတွက်ငွေနဲ့ပြင်ဆင်နေတယ်: Diruarekin prestatzen ari naiz, abuztuan urteak daramatzat
စက်တင်ဘာလမှာ Murcia မှာငါ့အဖွားဆီသွားလည်မယ်: Irailean nire amona Murtzia bisitatuko dut ။
အောက်တိုဘာလမှာငါတို့အရမ်းကောင်းတဲ့ Halloween party တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်: Halloweeneko festa bikaina prestatzen ari gara urrian
ဒီဇင်ဘာ၏အရေးကြီးဆုံးပွဲသည်ခရစ္စမတ်ဖြစ်သည်: Abenduko ospakizunik garrantzitsuenak Gabonak ကပြောလိမ့်မယ်။
ငါကငါ့မိသားစုတွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေလို့နွေရာသီကိုကြိုက်တယ်: Uda gustatzen zait nire familiarekin eta lagunekin gozatu doubtako
နွေ ဦး မှာငါ့ဥယျာဉ်ထဲကလှပတဲ့ပန်းလေးတွေကိုငါလေးစားနိုင်တယ်: Udaberrian nore lorategiko ဒဏ္ဍာရီ ederrak miretsi ditut
ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ကျွန်ုပ်၏မိဘများထံသွားရန်ဖလောရင့်သို့ခရီးသွားရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်Udazkenean Florentziara joateko ordua da nire gurasoak bisitatzera
ဆောင်းရာသီမှာသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုကြိုက်တယ်: Neguan၊ jantzi erosoak eroso sentitzen ditut
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Basque ကောင်းကောင်းမှာလပေါင်းများစွာသင်ယူရန်အလွန်အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုသည်ဤသီချင်းမှတဆင့်အလွတ်ကျက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
categories Euskera, ဘာသာစကား လက်မှတ်အညွှန်း
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဘာသာစကား » Euskera » Basque ရှိလများ
15:2018 pm မှာအောက်တိုဘာလ 3, 23